ချစ်တင်းနှောရာမှာ ပိုမိုသာယာမှု ရရှိစေဖို့ စားပေးသင့်တဲ့ အစားအစာ ၅ မျိုး | Buzzy
ချစ်တင်းနှောရာမှာ ပိုမိုသာယာမှု ရရှိစေဖို့ စားပေးသင့်တဲ့ အစားအစာ ၅ မျိုး
ထောပတ်သီးဟာ နှလုံးနဲ့ သွေးလွှတ်ကြောတွေကို သွေးစီးဆင်းမှု အားကောင်းစေမှာပါ ။ နှလုံးကြံခိုင်မှုဟာ အမျိုးသားများအတွက် အင်မတန် အရေးကြီးပြီး ဒါမှသူ ချစ်ရသူ အမျိုးသမီးကို ပိုမိုသာယာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှာပါ
ထောပတျသီးဟာ နှလုံးနဲ့ သှေးလှတျကွောတှကေို သှေးစီးဆငျးမှု အားကောငျးစမှောပါ ။ နှလုံးကွံခိုငျမှုဟာ အမြိုးသားမြားအတှကျ အငျမတနျ အရေးကွီးပွီး ဒါမှသူ ခဈြရသူ အမြိုးသမီးကို ပိုမိုသာယာအောငျ စှမျးဆောငျပေးနိုငျမှာပါ
အယ်လ်မွန်သီးဟာ အချစ်ဆေးလို့ ဆိုရမလားပါပဲ ၊ သူက သင့်ရဲ. ချစ်စိတ်ကို ဖြစ်စေပြီး ချစ်တင်းနှောရာမှာ လှုံဆော်မှုတွေကို တိုးပွားအားကောင်းစေပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သားသမီးလိုချင်သူတွေအတွက်လည်း အောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ စားသုံးသင့်ပါတယ်။
အယျလျမှနျသီးဟာ အခဈြဆေးလို့ ဆိုရမလားပါပဲ ၊ သူက သငျ့ရဲ. ခဈြစိတျကို ဖွဈစပွေီး ခဈြတငျးနှောရာမှာ လှုံဆျောမှုတှကေို တိုးပှားအားကောငျးစပေါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ သားသမီးလိုခငျြသူတှအေတှကျလညျး အောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။ အမြိုးသမီးမြား စားသုံးသငျ့ပါတယျ။
စတော်ဘယ်ရီသီးကတော့ အမျိုးသားများရဲ. သုတ်လွှတ်မှုကို အားကောင်းစေနိုင်ကြောင်း လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေအရ သိရပါတယ်။
စတ်ေဘာယျရီသီးကတော့ အမျိုးသားများရဲ. သုတ်လှတ်မှုကို အားကောငျးစနေိုငျကွောငျး လလေ့ာဆနျးစစ်မှုတွအေရ သိရပါတယျ။
ကမာကောင်နဲ့ အဆီများတဲ့ ငါးတွေဟာ သင့်ရဲ. ချစ်တင်းနှောလိုစိတ်ကို အစွမ်းကုန် မြှင့်တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမာကောငျနဲ့ အဆီမြားတဲ့ ငါးတှဟော သငျ့ရဲ. ခဈြတငျးနှောလိုစိတျကို အစှမျးကုနျ မွှငျ့တငျပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
အချဉ်ဓါတ်ကတော့ ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝပြီး အမျိုးသားများအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အစားအစာ တစ်မျိုးလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။
အခဉျြဓါတျကတော့ ဗီတာမငျစီ ကွှယျဝပွီး အမြိုးသားမြားအတှကျ မရှိမဖွဈ လိုအပျတဲ့ အစားအစာ တဈမြိုးလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။